Pep Guardiola oo sheegay kooxda cabsida ugu badan uu ka qabo tartanka Champions League wareeggiisa guruubyada isagoo dafiray PSG – Gool FM
(Manchester) 13 Sebt 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan xitaa il-biriqsi ka fikirin inuu wajahayo kooxda Paris Saint-Germain wareegga guruubyada ee Champions League.
Guardiola ayaa kahor tagi doona PSG oo xilli ciyaareedkan ku hubeysan xiddigii ay Barcelona kasoo wada shaqeeyeen ee Lionel Messi dhammaadka bishan iyagoo wada ciyaari doona kulanka labaad ee marxaladda guruubka.
Si kastaba ha ahaatee, macallinka reer Spain ayaa sheegay kulanka ugu adag ee wareegga guruubyada inuu yahay kulanka koowaad ee uu la ciyaarayo naadiga RB Leipzig isagoo arrintaas ka hadlaya ayuuna yiri: “Kulanka ugu adag waa midka koowaad ee aan la ciyaareyso Leipzig, waana kan ugu muhiimsan.
“Il-biriqsi kama fikirayo PSG, dhammaan kooxaha aan guruubka ku wajaheyno ayaa aad u adag” ayuu Guardiola sii raaciyay hadalkiisa.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ayaa guruubka A kula jirta kooxaha Paris Saint-Germain, RB Leipzig iyo Club Brugge, waxayna ciyaarta ugu soo horreysa la ciyaareysaa kooxda Jarmalka ah ee Leipzig habeenka Arbacada ee ay taariikhdu tahay 15-ka bishan September.